402 ♥ 1-Block ukusuka kwi-Main Sq ♥ Internet 40 megas ►►► - I-Airbnb
402 ♥ 1-Block ukusuka kwi-Main Sq ♥ Internet 40 megas ►►►
Ifenitshala ◄◄◄epheleleyo, ilungele ukuphumla, ukuhamba-hamba okanye ukusebenza kude. Isembindini, ikufuphi kwinto yonke kodwa ezolileyo ukuze uphumle. Inendawo yokusebenzela enesitulo esirhubuluzayo kunye nonxibelelwano lwe-Intanethi oluzinzileyo, i-40 megtes.
Izimvo ezingaphezu kwe-500 kwiiflethi okanye izindlu ezikwicomplex eziyi-4, ii-Superhost izihlandlo eziyi-18 zilandelelana, kunye nomlinganiselo xa uwonke ophantse ube ziinkwenkwezi eziyi-5, ziqinisekisa ukuba akuzukubakho nto ingalindelwanga ibe uza konwaba xa utyelele eSan Gil.
Bhukisha Imihla yakho!★★★★★
IIMPAWU ► EZIPHAMBILI...
- Kukho indawo enye ukusuka kwipaki
enkulu - Unxibelelwano olugqwesileyo lwe-Wi-Fi 20mb ezantsi kunye ne-10 ukunyuka.
- Indawo enye yokusebenzela enesitulo
esirhubuluzayo - Ukubhalisa xa ufika okulula nokukhawulezayo. Iikhowudi zokufikelela.
- Ishawari enomfutho omhle
- Ifenitshala epheleleyo, iflethi okanye indlu ekwicomplex
ephucukileyo netofoto - Iikhushini nezibane zokufunda kwigumbi lokulala
- Ibhedi enye esofeni kwigumbi lokuhlala.
- Inkonzo yokuhlamba impahla efumanekayo
- Iphezulu kufutshane neevenkile zokutyela eziphambili, iivenkile kunye nesikhululo sebhasi sikamasipala
- Isikhokelo esipheleleyo: Emva nje kokuba ubhukishile uza kufumana isikhokelo esinamacebiso ngezinto ezenziwayo neendawo.
► IIMPENDULO zemibuzo EDLA NGOKUBUZWA
‧ NGABA INAYO INDAWO YOKUPAKA?
Kukho indawo yokupaka yeeyure eziyi-24 ekude neflethi okanye indlu ekwicomplex. Iza kubiza i- $ 8.000 kuphela ngosuku. Ungapaka simahla esitratweni ngaphaya kwesakhiwo.
Khangela ngeentsuku ozidingayo, ukuba iyakuvumela, iyafumaneka. Ungayibhukisha.
‧ LELIPHI IXESHA esinokufika NGALO?
Ixesha lokufika lingemva ko-3:00 emva kwemini. Ukuba iflethi okanye indlu ekwicomplex ayibhatalelwa usuku olungaphambi kokuba ungene kodwa siza kwazi loo nto kude kube ngoko. Ukuba akunakwenzeka, sinendawo apho ungazigcina khona iibhegi zakho ngoxa ufika ngexesha.
‧ LELIPHI IXESHA esinokuphuma ngalo?
Kude kube ngo-11:00 kusasa ukuya kutsho ngo-12: 00 ebusuku ukuba uyayicela. Kufuneka siyilungiselele iflethi okanye indlu ekwicomplex ngo-3 emva kwemini ukuze ilungele iindwendwe ezilandelayo.
‧ SINGAKWAZI UKUFIKA ebusuku?
Ewe, akukho ngxaki kuba kukuzingenela ngokwakho ngeekhowudi zokungena oza kuba nazo ukususela ngo-3:00 emva kwemini ngosuku lwakho lokufika.
‧ YIMALINI XA IYONKE IMALI OMELE UYIBHATALE?
Yindlela ebonisa ngayo xa ucofa iqhosha lokubhukisha.
‧ Singayibhatala NJANI?
Ngekhadi lebhanki kuphela kwiwebhusayithi ye-Airbnb.
‧ Ngaba KUKHO ISAPHULELO?
Le flethi sele inexabiso elingatshintshiyo.
‧ ngaba UNAYO I-INTANETHI ENTLE?
Ewe, sinee megtes eziyi-20 ezikhutshiweyo kunye ne-megtes eziyi-20 ezifakwayo, iindawo ezininzi eSan Gil zine-10 kuphela ezantsi neziyi-5.
‧ Ngaba le FLETHI YEYETHU KUPHELA?
Ewe, yeyakho yonke. Yonwabele! ‧ Ngaba
singabhukisha USUKU OLUNYE KUPHELA?
Uxolo, akunakwenzeka. Sinepolisi yeentsuku ezimbini ukuze sikwazi ukugcina amaxabiso aphantsi.
‧ NGABA UNGANDINIKA INKCAZELO NGEZINTO EZENZIWAYO NAMANYE AMACEBISO?
Ngokuqinisekileyo, ukugqiba nje kwakho ukubhukisha, siza kukuthumelela isikhokelo esipheleleyo esisenzileyo ukuze ucebe kwaye uthathe okona kulungileyo kuhambo lwakho oluya eSan Gil.
‧ IPHI IFLETHI OKANYE INDLU EKWICOMPLEX?
Ikumgangatho wesine, (akukho zitepsi ezininzi) kwaye isakhiwo sikwindawo ephakathi eSan Gil, kufutshane nayo yonke into. Ikwi-Cra 8 emva kwecawa, ibhloko enye ukusuka kwipaki enkulu. Indawo engalibalekiyo!
‧ UNGANDINIKA INOMBOLO YAKHO okanye ndikunike EYAM NGAPHAMBI KOKUBHUKISHA?
I-Airbnb ayikuvumeli ukwabelana ngeenombolo ngaphambi kokubhukisha. Ndingakunika yonke inkcazelo onokuyisebenzisa ngobusuku kwiwebhusayithi, kwaye senza kuphela ukuthengiselana ngewebhusayithi njengoko kukhuseleke ngakumbi kwiindwendwe nakubabuki zindwendwe.
Ngaba UNAYO INKONZO YOKUHLAMBA IMPAHLA KWAYE INGAKANANI?
Ewe siyayenza loo nto. I- costo yi $ 7.000 ngekilo kunye ne- $ 2.000 yokuayinela ilaphu ngalinye ukuba uyalidinga.
► NGAPHAMBI KOKUBA UBHUKISHE, NCEDA ukhumbule ukuba uxolo lwazo zonke iindwendwe ezikwisakhiwo lubaluleke kakhulu kuthi ibe silindele ukuba uyihloniphe indawo, ngoko ayivumelekanga: iipati, ukusela kakhulu, iziyobisi, ukutshaya, umculo omkhulu, ukumemeza kunye neendwendwe ezingavumelekanga
< IGUMBI LOKULALA > IGUMBI LOKULALA linefeni, ikhabhathi enkulu, ibhedi etofotofo,
ukufunda imiqamelo nezibane, iikhethini kunye neekhethini ezimnyama xa zizonke. Ikwanembonakalo entle yeentaba kunye nesixeko.
< IGUMBI LOKUHLAMBELA > IGUMBI LOKUHLAMBELA linesepha, ishampu, iitawuli kunye neshawa eshushu nenomfutho omhle. Uza kuyithanda!
< igumbi lokuhlala > Igumbi lokuhlala line-TV, ifeni, indawo yokusebenzela kunye neebhedi ezimbini ezinesofa ezinokutshintshwa ezinokuhlala abantu abayi-4 kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex yabantu abayi-4.
< IKHITSHI > IKHITSHI linazo zonke izinto ezifunekayo ukuze upheke ukutya okuthandayo kunye nejusi. Ioveni, i-blender, umatshini wokwenza ikofu, iimbiza njl .
< PATIO> Kukho iveranda apho ungazixhoma khona iimpahla zakho Nceda ungazixhomeli iimpahla efestileni yegumbi lokuhlala.
Yonke into ikumgama ambalwa!! ..
Ikufutshane kakhulu kwisikwere esikhulu, imarike, isikhululo sebhasi sasekhaya, i-El Puente mall, kunye neendawo zokutyela ezilungileyo kakhulu edolophini njengeGringo Mike's ejikeleze ikona.
Ikwisitalato esikhuselekileyo nesi “zolileyo”. Awuyi kuva ingxolo evela kwigumbi lokulala kodwa unokuva ingxolo encinci evela kwiimoto kwigumbi lokuhlala ukuba ifestile ivuliwe.
< IINGCEBISO ZASEKUHLALENI > Siyathanda ukwamkela iindwendwe kunye nokunceda iindwendwe zethu ukuba zisebenzise ixesha labo eSan Gil. Sihlala sikuvuyela ukunika iingcebiso, izalathiso, uncedo ngobhukisho, njl. njl. Buza nje!
< ABASEBENZI> Ngamanye amaxesha, ukuba sikude eSan Gil, abasebenzi bethu uNancy okanye uSonia baya kubakho ukukunceda ngokungena kunye nayo nayiphi na enye into oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho.
< UNCEDO > Le flethi ikwisakhiwo esinye seSikolo sethu soLwimi-, ngoko sifumaneka kwisakhiwo ukususela ngo-8:00 kusasa ukuya ku-12:00 emva kwemini kunye no-2: 00 emva kwemini ukuya ku-8: 00 emva kwemini ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo. Ngamanye amaxesha singakunceda ngefowuni okanye nge-wsp. (Ukuba ayingxamisekanga kude kube ngu-10pm kwaye ukusuka ngo-7am)
< IINGCEBISO ZASEKUHLALENI > Siyathanda ukwamkela iindwendwe kunye nokunceda iindwendwe zethu ukuba zisebenzise ixesha labo eSan Gil. Sihlala sikuvuyela ukunika iingcebiso, izalath…